Luhlobo luni lwesikhonkwane se-UV ye-UV ecetyiswayo xa kuvulwa i-nail salon?
ngomphathi ku 21-10-09
I-gel yobugcisa be-UV ijeli yobugcisa be-Nail, ekwabizwa ngokuba yi-gel polish gel, luhlobo lwejeli esetyenziswa rhoqo kushishino lobugcisa besikhonkwane kwimarike. Ngenxa yokuba i-gel ye-nail polish iyanyangeka ngokukhanya, iibhotile ze-nail polish zonke zingqina ukukhanya ngaphandle. Kuyinto engenasinyibilikisi, enemibala, kunye nokusingqongileyo f ...
Umahluko phakathi kweoli yeenzipho kunye neenzipho ze-UV ye-gel
Kule mihla, abantu abaninzi banika ingqalelo kubugcisa besikhonkwane, kwaye iimveliso zobugcisa bezipikili ziyahlaziywa. Nangona kunjalo, uninzi lwabathandi bobugcisa bezikhonkwane, ipolishi yeoyile yeenzipho kunye neenzipho zepilisi yeenzipho zisengafani, nangona kukho igama elinye elahlukileyo. Kodwa umahluko ungamawaka eekhilomitha kude! Vumela ...
Umvelisi we-gel ye-nail poilsh yoMvelisi
UMBALA OMTSHA UBUHLE ubandakanyeka ikakhulu kwimathiriyeli yesiseko seenzipho, ipeyinti yombala kunye nezinto zokwenza imichiza. Ukwenzela ukubakhonza ngcono abathengi bethu, emva kweminyaka yokulima okunzulu kunye nomsebenzi oqwalaselwayo, UBUHLE BOMNTLA OBUTSHA buye ngokuthe ngcembe buyeyona nto iphambili ...
Abasetyhini bazimisele ukuchitha imali engaphezulu kwizikhonkwane, kwaye intengiso yobugcisa bejel iyakugqitha i-90 yezigidigidi ze-yuan ngo-2024
Amandla okuthenga kunye nokuphuculwa kokusetyenziswa kweqela labasetyhini akubonakali kuphela kwicandelo lokhathalelo lolusu kunye nezithambiso, kodwa kukwakhuthaza ukukhula ngokukhawuleza komzi-mveliso wezobugcisa bezikhonkwane. Kutshanje, iReportByuer, inkampani ethatha izigqibo kwimizi-mveliso eLondon, e-U ...
Ungayikhetha njani imveliso elungileyo ye-UV yesikhonkwane sejel?
ngomphathi ku 21-09-10
Abantu abakwishishini lobugcisa besikhonkwane bayazi ukuba i-gel yobugcisa obusemgangathweni obusemgangathweni sisitshixo esifanayo nobuchwephesha bobugcisa besikhonkwane, kodwa iglu yobugcisa besikhonkwane ayilingani njengeevenkile zobugcisa bezikhonkwane, ezenza iivenkile zobugcisa bezikhonkwane zibe nokukhetha xa ukhetha. Ke, loluphi uphawu lwe-gel ye-nail ye-UV elungileyo? Loluphi uhlobo lwejel yesikhonkwane esetyenziswa ngophawu ...
Uyisebenzisa kanjani i-gel yolwandiso lwesikhonkwane?
ngomphathi ku 21-09-04
Uyisebenzisa kanjani i-gel yolwandiso lwesikhonkwane? I-Gel Nail Art ibisoloko iyinto enomdla kakhulu kubahlobo abaninzi ababhinqileyo. Zininzi iindlela zokwenza ubugcisa beenzipho, ezinokwenza izandla zakho zibukeke zintle ngakumbi. Ke, ngaba kufuneka ndisebenzise i-gel yengubo yokuqala xa ndisebenzisa i-gel eyandisiweyo? Ndidinga ukufaka isicelo bas ...
Amanyathelo okhuseleko ekusebenziseni iinzipho zejel
Kwiminyaka yakutshanje, i-nail polish iye yaba yinkokeli kwitekhnoloji yobugcisa ngenxa yeendlela zayo ezahlukeneyo, ukugcinwa kwexesha elide, ukubonwa okugqwesileyo, ukuqaqamba okuphezulu, kunye neefomula zemveliso esempilweni. Kodwa ngamanye amaxesha ipilisi yejel yesikhonkwane ethathe ixesha kunye nemali ukuyenza ...
Yazi ngakumbi malunga nemveliso yeenzipho zejel
Ukubumba kwe-Nail ye-Nail eyenziwe kwi-acrylate, i-phenylacetone, i-pigment ye-organic, i-initiators, njl njl. Izinto ezingafunekiyo zejel ye-nail polish ivela kwi-resin yokunyanga ukukhanya, engenabungozi, esempilweni kwaye ikhuselekile, kwaye inezinto eziqhelekileyo ...
Amanyathelo okusebenzisa ukomeleza ijeli kunye nengubo ephezulu yejeli kwinkqubo yobugcisa besikhonkwane
Indima ye-primer (isiseko sedyasi yejel): Faka isicelo se-primer kumphandle wekhonkwane ukukhusela iinzipho, ukhethe ipolishi yesikhonkwane kukhukuliseko lomhlaba, kwaye inokusetyenziswa njengesixhobo sokuncamathelisa ukuphucula ukubambelela kwepikili kwipiki. Indima yokomeleza ijeli: ukomeleza ijeli yezikhonkwane ayisiyiyo ...
Iindidi ezithile zenzipho (i-Barbie glue, i-QQ nail polish)
ngomphathi ku 21-08-07
Iindidi ezithile zepilisi yeenzipho (i-Barbie glue, i-QQ nail polish) zezi zilandelayo: 1. Umbala oqinileyo we-nail polish (umbala ococekileyo we-nail polish) iya kulukuhla kwaye ikhanyise phantsi kokukhanya kwe-ultraviolet) 4. I-Luminous ge ...
Iipilisi zobugcisa beenzipho zejel
Xa utsala umgca, kufuneka ugcine amandla esandla sakho nkqu. Fumana indawo yokulungisa isihlahla sakho kwaye ungayigungqi. Dipha inani elifanelekileyo lesikhonkwane ngepeni yokuzoba, uze uzobe iphethini oyithandayo kwaye ugqibe. Abantu abaninzi bayathanda ukwenza iinzipho zabo ekhaya, ke ...
Ngaba ndingasebenzisa ijeli yengubo ephezulu endaweni yesiseko sejel?
Ukuba awunayo i-gel yengubo yesiseko, ungasebenzisa ijeli yengubo ephezulu endaweni yoko. Idyasi yesiseko kunye nengubo ephezulu zombini ziyabonakala i-nail polish kwaye ziyafana nakwimeko, kwaye zomelele kakhulu emva kokufakwa kwesicelo, ke ukuba awunayo ijeli yengubo yesiseko, ungayifaka ngokupheleleyo ngengubo ephezulu. Okanye Wena ...